HARARE, Zimbabwe (AP) -- Two Zimbabweans arrested for illegally hunting a protected lion named Cecil were in court on Wednesday as anger at the kill by an American dentist escalated.
Social media on the internet -- for example on Twitter under #cecilthelion -- were also filled with condemnation of the killing of the black-maned lion just outside Hwange National Park in Zimbabwe.
The Zimbabwean men -- a professional hunter and a farm owner -- are accused of helping Walter James Palmer hunt the lion. Zimbabwean police said they are looking for Palmer, who reportedly paid $50,000 to track and kill the animal.
The two Zimbabwean men appeared at the Hwange magistrate's court, about 435 miles (700 kilometers) west of the capital Harare, to face poaching charges. Defense lawyer Givemore Muvhiringi says the proceedings have been delayed by several hours because prosecutors are "making their assessments."
The professional hunter who allegedly acted as Palmer's guide has been stripped of his license while he faces criminal charges, the Zimbabwe National Parks and Wildlife Authority and the Safari Operators Association said in a joint statement. The farm owner also facing criminal charges did not have a hunting permit, the joint statement said.
He is believed to have been killed on July 1 in western Zimbabwe's wildlife-rich Hwange region, its carcass discovered days later by trackers.